Iiwebhusayithi zisenguMthombo oSebenzayo weNgeniso yokuNgena | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 19, 2013 NgoLwesithathu, uDisemba 17, 2014 ULarry Alton
Ukuba ungakholelwa kuyo yonke into oyifundayo, ukuqala iwebhusayithi ukuze ufumane umvuzo ongenanto kuya kuba sisizathu esilahlekileyo kwezi ntsuku. Abo baqinisekisile isatifikethi sokufa batyhola ukhuphiswano olukhulu kunye nohlaziyo lukaGoogle njengezizathu zokuba ingeniso yesiqhelo yemveli, ngentengiso ehambelana nayo, ayisengomthombo wokwenza imali.
Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu obonakala ngathi uyifumene imemo. Ngapha koko, basebaninzi abantu kwiwebhu abenza ipenny entle nangona befumana umvuzo kwiwebhusayithi yabo.
Ingeniswa njani i-Passive Income kwiWebhu
I-Investopedia ichaza umvuzo ongenanto njengaleyo "umntu ayifumana kwishishini angabandakanyeki kulo."
Iipropathi zeWebhu zaba ngumthombo oqinileyo wokufumana umvuzo kubantu abaninzi abakwaziyo ukwenza amaphepha ambalwa omxholo oya kuba kwindawo ephezulu kuGoogle okanye ezinye iinjini zokukhangela. Ukuthembela koku, abanini besiza baya kukhuthaza iimveliso njengezibandakanyekayo; Ukufumana imali kumthengi ngamnye abathumela kwindawo leyo bayinxalenye yayo. Abanini bepropathi yewebhu baya kuthi, amaxesha ngamaxesha, bahlaziye ezinye umxholo, Yakha ezinye i-backlinks okanye ufikelele kwiposti yebhlog yeendwendwe kodwa ngaphandle kokuba ulindelo kukuba iwebhusayithi izakuqhuba ngaphandle kongenelelo oluninzi kwaye ivelise inzuzo esempilweni.
Kodwa amaxesha atshintshile. Uhlaziyo lukaGoogle lwealgorithm lenze ubume be-backlink engeyiyo eyendalo kangangokuba uninzi lweewebhusayithi ezingenayo zihlala kwisohlwayo kwinqanaba lokukhangela. Unxibelelwano oluninzi kakhulu lokudibana kunye nentengiso zikwabangele ukuba uninzi lwezi ndawo ziphulukane nendawo yazo phakathi kweziphumo. Ngaphandle kwenqanaba eliphezulu, umvuzo kwezi ndawo womile.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba imodeli enye yengeniso yokungahambi ayisasebenzi iziphumo ezifanayo ayithethi ukuba intsimi ifile. Ngapha koko, zininzi iindlela apho iiwebhusayithi zivelisa iziphumo ezintle ngohlobo lwengeniso yokungena.
Ukwenza iiSayithi zeWebhu zisebenze ngo-2013
Emuva kwi 2012, Imagazini yeForbes yaqhuba isiqwenga Isihloko esithi, “Izizathu ezi-4 eziPhezulu zokuba kutheni 'iNgeniso yoMvuzo' ingumbono oyingozi.” Kuyo, bachaze ukuba akukho webhusayithi inokubamba kwaye igcine abathengi ngokungakhathali. Kuhlala kukho umsebenzi ekufuneka wenziwe ukuze uhlale uphambili kukhuphiswano. Ngelixa kuyinyani, umbono ophuma kwimali engenayo usengaba ngumenzi wemali omkhulu-ukuba iwebhusayithi yakho ibonelela ngolwazi olufunwa ngabantu, ungazuza. Leyo yinxalenye yokungenzi nto, kodwa umntu kufuneka ayithengise kwaye ayilungelelanise nomxholo.
Ngo-1999, utyalo-mali owaziwayo uTim Sykes wenza kufutshane ne-2 yezigidi zeedola zokuthengisa ngosuku phakathi kweeklasi kwiYunivesithi yaseTulane. Kule mihla, uthatha amacebo amenze loo mali kwaye wayiguqula yayiklasi yokwakha ubutyebi ehanjiswe kwi-Intanethi. Unxibelelana nabafundi bakhe, kwaye uyayithengisa imveliso yakhe kodwa umxholo wekhosi ayisiyonto ifuna utshintsho olukhulu.
Ukufundisa okuxabisekileyo, okanye ubuncinci ukufuna emva, ubuchule yenye yeendlela zokuguqula iwebhusayithi ukuba ibe ngumthombo wengeniso.
Iincwadana zeendaba ziyenye indlela yokuba iipropathi ezininzi zewebhu zenze ingeniso. Hayi ngentlawulo yobhaliso, kodwa ngentengiso ehambelana nayo.
Ukwakha uluhlu olukhulu lwabantu abanomdla kunokujika inzuzo ehloniphekileyo. Kodwa ukwakha olo luhlu kuqala ngokufumana ukuthembela kwabakhenkethi kwiwebhusayithi. Xa belindele ulwazi oluthe kratya, amathuba okusayina ukuze bafumane incwadana yeendaba aphezulu kakhulu. Iphepha leendaba, ukuba linomxholo obalulekileyo, linokusetyenziselwa ukuthengisa iimveliso ngentengiso ehambelana nayo.
thabatha CopyBlogger.com, umzekelo. Inginginya yeebhlogi zilandela le ndawo ngolwazi malunga nendlela yokwenza iibhlog zabo zibengcono, kwaye umntu ngamnye obhalisa ukufumana iimeyile ezivela kubo uhlala eziswa kwisibonelelo esiya kunceda ukwenza imali yendawo.
Kukwanokuthethwa okufanayo ngeepodcasts, iibhlog okanye olunye uhlobo lwentanethi. Logama ulwazi ludumile kwaye lunceda abantu ukusombulula ingxaki, lunokunceda amaqela omabini.
Iiwebhusayithi zisengangumthombo olungileyo wengeniso ukuba zibonelela ngexabiso kubasebenzisi ngandlela thile. Iindlela ezindala zokuphosa kunye kunye namagama aphambili atyebileyo kwigarner ukukhangela izithuthi ifile, kodwa ayisiyonto imbi kwaphela leyo. Ingxolo kunye nokuxinana kwezi ntlobo zeziza kubonelelwe kuphela kususwe kwiindawo ezinikezela ngento ezinokuyinyelwa ziindwendwe zabo.
Isitshixo sempumelelo kukubonelela ngento efunwa ngabantu. Kuya kuhlala kunemali ekufuneka yenziwe kwi-Intanethi xa le nto ilula yenziwa ngokufanelekileyo.
tags: ukwenza imali onlineurhwebo onlineumvuzo ongenayoukuthengisa kwiwebhu
Yandisa ukuThwala kweenyawo ukuGcina kunye nakwi-Intanethi ngeFATWIN
Ndicinga ukuba ukuba sihamba ngengeniso engenziwanga kwiwebhusayithi, kuya kufuneka sityala ixesha, izixhobo kunye nesicwangciso sobundlobongela ukuze sihlale silungile. Yenza umxholo oluncedo, wenze imali ngawo kwaye wakhe uluntu. UGoogle kunye nezinye iinjini zokukhangela zithanda i-buzz kunye nomsebenzi ngaphakathi kwesiza.
Sep 20, 2013 kwi-7: 10 AM
Ndiyavumelana nawe Larry! Ukuba ufuna ukuba ishishini lakho liphumelele, kunyanzelekile ukuba ube newebhusayithi eyilelwe ukuthengisa kwi-Intanethi Nokuba amancinci, amashishini endawo afuna iwebhusayithi elungileyo ukuphucula ukubonakala kweshishini labo kunye nemveliso.